Soy milk ပဲနို့ – Mawlamyine Daily
Posted on July 11, 2018 by Mawlamyine Daily
မော်လမြိုင်၊ ၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈
၁။ ဆရာရှင့် အခုတလော facebook မှာ ကလေးငယ်တွေကို ပဲနို့လုံးဝမတိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ post ကိုတွေ့ပါတယ်ရှင့် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးနဲ့ပဲနို့တိုက်ခြင်းအကြောင်း သိချင်လို့ပါရှင် ကျွန်မမှာ ၂နှစ်ငါးလအရွယ် သားလေးတယောက် ရှိပါတယ် သားလေးကို တခါတခါ ပဲနို့ဝယ်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် အဲ့ဒါကြောင့် ပဲနို့ရဲ့ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးလေးတွေ သိချင်လို့ပါ ဆရာအချိန်ရခဲ့ရင် ဖြေဆိုပေးပါဦးရှင့် ဆရာကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင့်
အခုတလော facebook မှာလို့မေးတာတိုင်းကို သိပ်မဖြေချင်။ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေက များတယ်။
၂။ ဆရာရှင့် အခု online ပေါ်မှာရေးတင်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ပဲနို့တိုက်ရင် အသက်အန္တရာယ်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေး ဆေးပညာသဘောအရ ရှင်းပြပေးပါရှင့်။ ကျွန်မတို့မိခင်များအနေဖြင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ သိပါရစေရှင့်။ လေးစားအားကိုးလျှက်။
အခု online ပေါ်မှာရေးတင်နေတဲ့လို့မေးတာတိုင်းကို သိပ်မဖြေချင်။ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေက များတယ်။
3. Breast Milk မိခင်အစားအသောက်နဲ့ နို့ရည် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/breast-milk.html
4. Breastfeeding linked to higher IQ မိခင်နို့တိုက်လျှင် ကလေးဥာဏ်ရည်မြင့် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/breastfeeding-linked-to-higher-iq.html
5. Breastfeeding linked to higher IQ မိခင်နို့တိုက်လျှင် ကလေးဥာဏ်ရည်မြင့် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/breastfeeding-linked-to-higher-iq.html
6. Condensed Milk နို့ဆီ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/03/condensed-milk.html
7. Contraceptives and breastfeeding ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ နှင့် ကလေးနို့တိုက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/contraceptives-and-breastfeeding.html
8. Diet forabreastfeeding mom (1) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diet-for-breastfeeding-mom-1.html
9. Diet forabreastfeeding mom (2) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diet-for-breastfeeding-mom-2.html
10. Formula Feedings နို့မှုံ့တိုက်နည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/formula-feedings.html
11. Formula Milk and Breast Milk မိခင်နို့နဲ့ နို့မှုန့် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/02/formula-milk-and-breast-milk.html
12. Hepatitis B and breastfeeding အသဲရောင် ဘီ ပိုးရှိသူ မိခင် နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-b-and-breastfeeding.html
13. Lactose free milk လက်တို့စ်ဖရီး နို့မှုန့် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/lactose-free-milk.html
14. Milk types နွားနို့အမျိုးအစားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/milk-types.html
15. Soy milk ပဲနို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/soy-milk.html
16. Supplementary foods ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/supplementary-foods_18.html
17. Weaning ကလေးကို နို့ဘယ်တော့ဖြတ်မလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/weaning.html